Uyifaka njani i-WhatsApp kwimo emnyama? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifaka njani i-WhatsApp kwimo emnyama?
Faka i-WhatsApp kwimowudi emnyama Kukusebenza kwesicelo esivumela ukubonakala okungcono kwescreen sefowuni ebusuku. Nangona kunjalo, abasebenzisi abaninzi bayisebenzisa yonke le mini kuba ikhululekile ngakumbi emehlweni.
Ukwenza ukuba oku kusebenze kube lula kwaye kulula, kwaye kwenziwa kwisicelo esinye esifakwe kwifowuni, ngenxa yoko beka WhatsApp imowudi emnyama iya kuba ngumsebenzi olula kwabo basebenzisi abafuna ukuvuselela amehlo abo xa bejonga isicelo.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukubeka i-WhatsApp kwimo emnyama
Ngaphakathi kwi-app beka WhatsApp kwimowudi emnyama Ivumela abasebenzisi ukuba batshintshe umxholo ukusuka kumhlophe ukuya kumnyama. Ukuyisebenzisa, umsebenzisi kufuneka avule i-WhatsApp kwisixhobo sakhe esiphathwayo, emva koko ajonge ezinye iinketho zemenyu, zilandelwe yimenyu esezantsi, apho kukhethwe khona imenyu engaphantsi yengxoxo, kwaye okokugqibela ukhetho lomxholo lukhethiwe.
Sele ungena kwimenyu yokukhetha umxholo ukubeka WhatsApp kwimowudi emnyama, Umsebenzisi unokhetho olunambini, ukuba ukhetha ubumnyama, usebenzisa imowudi emnyama, kwaye ukuba ukhetha ukukhanya, ucima indlela emnyama. Ngale ndlela unokuvula ngokulula kwaye usebenze lo msebenzi.
Xa uzama beka WhatsApp kwimowudi emnyama umsebenzisi unakho ukusebenzisa indlela emiselweyo yinkqubo, eyenza imowudi emnyama ifane noseto lwesixhobo esiphathwayo. Ungangena kwimenyu yohlengahlengiso, emva koko ukhangele kwaye ujonge ukhetho ukwenza okanye ukukhubaza imowudi emnyama.
Kutheni ubeka i-WhatsApp ebumnyameni?
Faka i-WhatsApp kwimowudi emnyama Iye yathandwa kakhulu namhlanje kwaye izizathu zoku zingaphezulu kwemiba enxulumene ngokusisiseko nobuhle besicelo; Zinxulumene kakhulu nempilo ebonakalayo, kuba ukusebenzisa imowudi emnyama kunefuthe elihle kumbono womsebenzisi wescreen seselfowuni.
Ekuqaleni usetyenziso lwalunemvelaphi yokukhanya kunye noonobumba abamnyama, kodwa kwaboniswa ukuba ngeeyure zasebusuku, apho ukukhanya kwendalo kungafumaneki, le ndlela yokubonisa ichaphazela umbono womsebenzisi. Ke ngoko abaphuhlisi babeka ukhetho kwi beka WhatsApp kwimowudi emnyama, oko kuthetha ukubeka iphepha lodonga elimnyama okanye elimnyama ngokupheleleyo kunye noonobumba abathile kumbala okhanyayo ngaphandle kokuqaqamba.
Ilungiselelwe beka WhatsApp kwimowudi emnyama Ngaphakathi kwesicelo, ababhekisi phambili bahlengahlengise imibala yezinto ezenza ukubonakala kwemizobo ngaphandle kokuguqula umbutho wabo ngaphakathi konxibelelwano, besebenzisa iitoni ezimnyama ezingwevu okanye ezimnyama kwimvelaphi kunye nemibala ekhanyayo yoonobumba ukuze babonakale.
Inzuzo yokubeka i-WhatsApp emnyama kakhulu
Faka i-WhatsApp kwimowudi emnyama inezibonelelo ezibini ikakhulu. Okokuqala, yenza ukuba abasebenzisi banciphise i-eyestrain ngaphakathi kunye neendawo ezimnyama. Phantse uninzi lwabasebenzisi lubonakalisiwe ukuba lukhetha imowudi emnyama yokuba ingacacanga.
Uncedo lwesibini lwe beka WhatsApp kwimowudi emnyama inxulumene nokusebenza kwesixhobo esiphathwayo, njengoko kubonisiwe ukuvumela ukonga kakhulu ibhetri, ngakumbi kwizixhobo ezitsha zeselfowuni.
1 Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukubeka i-WhatsApp kwimo emnyama
1.1 Kutheni ubeka i-WhatsApp ebumnyameni?
2 Inzuzo yokubeka i-WhatsApp emnyama kakhulu
Uyibeka njani i-Instagram yakho kuFacebook?
Ungayithumela njani kwi-Instagram kwi-pc?